I-Romantic Getaway kunye neyona nto iBalaseleyo kuwo omabini amaHlabathi - I-Airbnb
I-Romantic Getaway kunye neyona nto iBalaseleyo kuwo omabini amaHlabathi
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguMichaela
Indawo yethu ephezulu enomoya ibekwe kweyona ndawo indala ye-Alhama-iBarrio Arabe kwaye ibekwe ngokugqibeleleyo kwisiseko sokuhamba okanye sokukhwela ibhayisekile kwiipaki zelizwe, ukujonga indawo yasekhaya okanye ukonwabela isantya sobomi esiphumlileyo, iziselo kunye neetapas. Siyakuthanda ukuba kufutshane nevenkile enkulu kunye nokuba ngaphantsi kohambo lwemizuzu eli-10 ukuya kukhetho olulungileyo lweebha. Iimbono ezisuka kwitharetha zezomhlaba otshintsha ubunzulu kunye nombala ngokuqhubekayo njengoko ilanga lihamba esibhakabhakeni. Okona kulungileyo kuzo zombini zehlabathi.
Indawo yethu ibekwe kweyona ndawo indala yeAlhama kodwa ibonelela ngendawo yangoku kunye nezixhobo. Kukhaphukhaphu kwaye kunomoya ngaphakathi - engaqhelekanga kwizindlu ezindala kule ndawo. Ummandla wangaphakathi unama-41m sq. Kukho isitovu somthi esibaswayo ukuze sithokomele kubusuku basebusika kwaye kusoloko kukho umbono oguqukayo ukusuka kwithafa. Ukubukela ilanga liphuma ngekofu kusasa ukuze ubone ukuthamba kwemibala ngokuhlwa ngeglasi yento ebandayo.
32" TV ene-I-Netflix
Iindwendwe zihlala zimangaliswa kubungakanani be-Alhama. Lukhetho oluhle lweekhefi, iibha, iindawo zokutyela, iivenkile ezinkulu kunye nezinto onokuthi uzenze kule ndawo. Kukho ukhenketho olucwangcisiweyo lwedolophu apho unokufunda malunga nenkcubeko etyebileyo kunye nembali. I-Alhama ikwasisiseko esilungileyo sokuhamba intaba, ukukhwela ibhayisekile kwaye kunjalo, utyelelo kwimithombo eshushu edumileyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Michaela
Sihlala kwigumbi elisezantsi kwaye siya kukwamkela xa ufika kwaye ufumaneke ukuba uphendule imibuzo kwaye wenze ukuhlala kwakho kukhululeke kangangoko. Siyaqonda ukuba undwendwe ngalunye lunokhetho olwahlukileyo lokunxibelelana kwaye siya kuthatha ingcebiso yethu kuwe.
Sihlala kwigumbi elisezantsi kwaye siya kukwamkela xa ufika kwaye ufumaneke ukuba uphendule imibuzo kwaye wenze ukuhlala kwakho kukhululeke kangangoko. Siyaqonda ukuba undwendwe ng…
Inombolo yomthetho: VTAR/GR/01198
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Alhama de Granada